Komisonina hanome karatra ny mpanao gazety Nicolas Rabemananjara no voafidy ho filoha
Vary simba nodorana Mbola nifandrombahan’ny olona indray
Mampahonena ! Efa tena any an-tsoso-koditra ny fahantrana sy ny fahasahiranana ho an’ny Malagasy ka na fako io na zavatra efa simba dia tsy mampaninona intsony ny mihinana azy.
Loza be tany Tsaratanàna Olona 27 maty, omby 3067 lasan’ny dahalo
Hanao hazalambo ireo dahalo mandripaka ny distrikan’i Tsaratanana, indrindra fa ireo dahalo ambony latabatra sy ireo mpiray tsikombakomba aminy ireo mponina any Tsaratanana, tarihin’ny solombavambahoaka Ratefiarivony John.
Tezitra ny mpiasan’ny AAA-Tiko “Akatony koa ny Socolait”
Miakatra indray ny maripana mikasika ny fanakatonana ny Orinasa AAA any Andranomanelatra Antsirabe, izay mampiasa sy manofa ny fitaovana sasantsasany an’ny orinasa Tiko.
Fandaminana ny tsena Petite Vitesse Hiara-kiasa akaiky ny mpivarotra sy ny lehiben’ny tsena
Hiara-kiasa akaiky manomboka izao ireo mpivarotra an’arivony eo anivon’ny Tsena Fihavanana Petite Vitesse sy ny lehiben’ny tsena Atoa Razafindrakoto Mbolatiana.
Hena tsy fanta-piaviana amidy ao Antsirabe Henjana ny fitsirihana ataon’ny BMH
Ankoatra ny fidangan’ny vidim-bary dia efa manomboka tsy taka-bidy ihany koa ny hena amin’izao fotoana.
Fisotroana toaka sy labiera Lohalaharana ny Malagasy
Na dia niakatra efa ho avo 2 heny aza ny vidim-bary eny an-tsena dia tsy manakana ny Malagasy hirevy izany amin’izao annkatoky ny fety izao.
Bruno Ravelonanosy Miantso ny CNaPS hiala tsiny
Manoloana ny fampandrenesana an-gazety nataon’ny orinasam-panjakana miahy ny sosialim-bahoaka na ny CNaPS ny 15 sy 16 novambra lasa teo izay milaza fa izaho,
Ny 8 janoary 2018 izao no handraisan’ny avy eo anivon’ilay komisionina manokana misahana ny fitsinjarana ireo karatra maha matihanina ny mpanao gazety eto Madagasikara ny fangatahan’ireo mpanao gazety maniry hahazo izany.
Ny 5 febroary kosa no fetra farany handraisana izany, raha ny fanazavan’ireo mpikambana ao anatin’ity komisionina ity tetsy amin’ny hotely Le Louvre Antaninarenina omaly. Hifarimbona ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrimpanjakana, ny holafitry ny mpanao gazety ary ity komisionina ity, hoy ny fanazavana, amin’ny asa fanadiovana ny tontolon’ny fanaovan-gazety eto Madagasikara. Lany ho filohan’ny komisionina moa Atoa Nicolas Rabemananjara , filoha tale jeneralin’ny TV Plus Madagascar, raha toa ka vofidy ho mpitondra teny kosa i Mara Volamiranty Donna; nahazo isam-bato 5 tamin’ireo 6 tonga nifidy izy mianadahy ireto.Hiandraikitra ny fifandraisana amin’ny haino aman-jerim-panjakana kosa I Rocco Rasoanaivo, raha toa ka hisahana ny gazety an-tsoratra i Hery Rakotomalala.Mialohan’ny fandaminana rehetra mikasika ny fandraisana ireo fangatahana, araka izany, dia hitety ireo orinasan-tserasera ireto komisionina ireto. Isan’ny mbola hanaovana fanadihadiana manokana moa ny tena isana mpanao gazety manerana ny nosy satria dia raha 1300 isa ireo voaisa tamin’ny fanisana farany dia mampiahiahy ny 600 isa amin’ireo, raha ny fanazavana. Karatra maha mpanao gazety, hoy ny komisionina, ilay ho zaraina ka noho izany dia tsy hahazo izany ireo tsy mpanao gazety intsony na ny minisitra aza. Fepetra takiana kosa ny hoe niasa 3 taona fara-fahakeliny tao amina gazety iray ary mbola manohy izany ao na manana mari-pahaizana maha mpanao gazety no sady efa manao asa fanaovan-gazety raha te hahazo karatra.